Mutengo weChingwa Unodzikiswa Kutanga Chishanu
Chingwa chinonzi chadzikiswa mutengo nekuda kwekuwaniswa mari kwevanogaya upfu nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe, R-B-Z.
Sangano revanogaya upfu reGrain Millers Association of Zimbabwe rinoti mutengo wechingwa wadzika kutanga neChishanu kubva pamadhora makumi manomwe nemapfumbamwe kuenda pamadhora makumi matanhatu nematanhatu emari yemunyika parofu.
Sachigaro veGrain Millers Association of Zimbabwe, VaTafadzwa Musarara, vakati izvi zviri kuenderana nemutengo wedhora rekuAmerica pamusika wemari weForeign Currency Auction System, wakaparurwa neReserve Bank of Zimbabwe masvondo maviri adarika.
Vachitaura nemusi weChina kuvatori venhau, VaMusarara vakati vakaita musangano nagavhuna veReserve Bank of Zimbabwe, Doctor John Mangudya, nguva pfupi yadarika pavakawirirana kuti vanogaya upfu vawaniswe mari yekunze, izvo zvadzikisa mutengo wechingwa pamusika.
VaMusarara vakati musangano wavo uyu wakauya mushure mekuparurwa kwemusika wemari yekunze nebhanga guru renyika.
Nyanzvi mune zveupfumi, vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Doctor Prosper Chitambara, vanoti sezvakaziviswa nesangano revanogaya upfu, kuderera kwemutengo wegorosi kubva pamadhora zviuru zvitatu nezana nemakumi mashanu patsaga kuenda pamadhora zviuru zviviri nezana nemakumi matatu nemanomwe ndiko kwakonzerawo kuderera kwemutengo wechingwa.
Asi vanoti kuderera kana kukwira kwemutengo wemari yekunze pamusika wemari ndiko kuchave nechekuita zvakanyanya nemutengo wechingwa muZimbabwe kusvika zvinhu zvagadzikana nekuti gorosi riri kutengwa kubva kunze.
Doctor Chitambara vanoti kugadzirisa dambudziko iri kunge chete kana nyika yave kukwanisa kuzvirimira yoga gorosi rinokwanira nyika yose, kwete kana nyika ichiri kutenga gorosi kubva kunze kwenyika.